Hofanina amin'ny ady amin' ny kolikoly ireo mpampianatra
Accueil » Onjam-piainana » Hofanina amin’ny ady amin’ ny kolikoly ireo mpampianatra
Omena fiofanana amin’ny ady amin’ny kolikoly ireo komity eo anivon’ny farim-piadidiam-pampianarana (CISCO) Analamanga. Noso­kafana tamin’ny fomba ofisialy ny fampiofanana ny mpikambana ao amin’ny komity mpiady amin’ny kolikoly, omaly, tetsy Benasandratra. Haharitra enina andro ny fampiofanana ireo mpikambana ireo.
« Ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena mihitsy no manao ny hetsika ady amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fanabeazana. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hanafoanana tanteraka ny kolikoly eo anivon’ny sampam-mpapianarana rehetra eto Madagasikara », hoy Andria­milamina Jery, tompon’ andraikitra eo anivon’ny biraom-paritry ny fanabeazam-pirenena ao amin’ny faritra Analamanga.
Araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra dia vondron’olona 16 isaky ny fari-piadidiam-pampianarana fito ao amin’ny faritra Analamanga no hiatrika ny fampiofanana ady amin’ny kolikoly.
Tsy olon’ny fampianarana ihany, anefa no ho tafiditra ao amin’ny komity mpiady amin’ny kolikoly. Ahitana mpiasan’ny CISCO sy solotenan’ny disitrika ary solotenan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra sy
solotenan’ny sendikan’ny mpampianatra ny komity mpiady amin’ny kolikoly isaky ny fiari-piadidiam-pampianarana ao amin’ny faritra Analamanga.
Aza mampiome eo e. Io resaka kolikoly io, amiko manokana dia resaka matava fotsiny. Tsy ilanina akory ny fampiofanana fa rehefa tsra ny toe tsaina, manomboka hatrany ambony ka hatraty amin’ny ambaratonga pahefana farany ambany dia foana ho azy io. Inona moa no mety ho antony mahatonga azy io fa tsy ny fahantrana e, ny tsy fahampiana, ny tsy fananana fahononantena e! Dinihop fakafakao dia hamarinon disoy ny teniko. Mila motivena ny olona mila jerena ny fitovia-tsaranga …. saing tsy izany no atao fa lany andro amin’ny fampiofanana, lany andro amin’ny fanovana anaran-javatra. Tena « faible » e. Azafady ho an’ny mora tohina. Fo sport
Musique urbaine – « Threestyle » en trois groupes de rap